Kugara Kamuri Pfungwa. Imba yekutandarira fenicha uye yemazuva ano yekugara 2019 2018. Mifananidzo yeimba yekutandarira ine mapikicha nemavara. Diki imba yekutandarira mazano. Imba yekutandarira yemidziyo grey. Imba yekugara kana yekugara fenicha nenzvimbo yekudyira.
Dhizaini yemukati - mashoma mazano uye matipi eimba yekutandarira
Pfungwa dzekugara - TV pamberi pekicheni
Dhizaini yemukati - mazano eimba yekutandarira mumatoni akareruka
Neiyi projekiti yezvakanaka uye zvinoshanda zvemukati dhizaini
Iyi purojekiti yekugadzirwa kwemukati meimba yekurara miviri
Yemukati dhizaini - mazano eimba yekutandarira pakati pe25 ne35 mativi emamita.
Nezvazvino masikati mazano ari pakati pe25 ne35
Mazhinji emukati magadzirirwo emapurojekiti anotsamira pane zvinoshamisa
Kana tichitaura nezve zvemukati dhizaini mazano eimba huru yekugara,
Pano zvakare isu tichaisa mamwe mazano eimba yekugara nevazhinji
1 peji kubva ku512345Inotevera »